मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर, अर्को वर्षदेखि निर्यात गर्ने घोषणा ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर, अर्को वर्षदेखि निर्यात गर्ने घोषणा !
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने चरणमा पुगेको बताएका छन् ।
राजधानीमा नेपाल जनप्रशासन सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले कतिपय जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएका र केही आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेको बताए । उनले अर्को वर्षबाट नेपाल विद्युत् निर्यात गर्ने देशका रुपमा परिचित हुने जिकिर गरे ।
मुलुकमा विसं १९६८ सालको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुलीको शुरुवात भएको थियो । त्यसको एकसय वर्षसम्म मुलुकको विद्युत् उत्पादन क्षमता एक हजार मेघावाट नपुगेको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षभित्रमा त्यसको क्षमता दुई हजार मेघावाट नाघ्ने बताए ।
यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको भन्दै उनले भने, नेपाललाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउने चरणमा पुगेका छौँ, लोडसेडिङ अन्त्य मात्रै हाइन, बर्सातको समयमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर भइसकेको छ, अर्को वर्षदेखि विद्युत् निर्यात गर्ने देशका रुपमा परिचित हुँदैछौँ ।”
गएको बर्सातमा केही विद्युत् निर्यात गर्न सफल भएको जानकारीसमेत दिनुभयो । हिउँदयाममा केही आयात गर्नुपर्ने भए पनि बर्सातमा भने आयातभन्दा धेरै निर्यात हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् चुहावट हुनबाट रोक्नु अर्को चुनौती रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न निरन्तर लागिरहेको जानाकरी दिए । तीन वर्षअघि २६ प्रतिशत चुहावट रहेकामा अहिले १५ प्रतिशतमा झारेको र त्यसबाट वार्षिक रु सात अर्ब बढी थप आम्दानी गरेको उनको भनाइ छ । रासस
मलामी गएका शिक्षक महिनादिन बित्दा पनि घर फर्केनन्
असार २४। धनकुटा, आफन्तको मलामी गएका धनकुटाको चानुवाका एक शिक्षक एक महिनायता बेपत्ता छन् । स्थानीय वीरेन्द्र […]
नयाँ युगको आरम्भ
काठमाडौँ, राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधानसभाको आजको विशेष बैठकमा ‘नेपालको संविधान, २०७२’ प्रारम्भ भएको […]
संशोधन प्रस्ताव मान्दैनौँ
सप्तरी। सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय समस्याको सम्बोधन नगरी ल्याइने संशोधन […]
ट्रक दुर्घटनामा परी एकको मृत्यु, आठ घाइते
भदौ ५ ।धादिङ,काठमाडौँबाट वीरगन्जतर्फ जाँदै गरेको ना १ ख ८१८२ नम्बरको ट्रक पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत धादिङको […]
कांग्रेसको गाउँ तथा नगर अधिवेशन नसर्ने
काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेसको यही १५ गतेका लागि तय भएको गाउँ तथा नगर अधिवेशन सोही मितिमै हुने भएको गरेको छ […]